musha Vatambi Bio Yalitza Aparicio Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Yedu Yalitza Aparicio Biography inoratidza Chokwadi paNyaya yake Yehudiki, Hupenyu hwepakutanga, Mhuri, Vabereki, Murume, Mararamiro, Net Worth uye Hupenyu hweMunhu.
Nemashoko akareruka, iyi inyaya yeHupenyu Hwendo hwake, kubva paudiki hwake kusvika paakava nemukurumbira.
Yalitza Aparicio - Kubva paMazuva Ehudiki hwake kusvika kuNguva yeMukurumbira.
Hongu, munhu wese anoziva kuti ndiye mumwe wevamhanyi-vanokurumidza kusimukira vanozivikanwa kwazvo nebasa rake mu2018 drama firimuRoma".
Nekudaro, vashoma chete vevateveri vanofunga Yalitza Aparicio's biography, iyo yatakagadzirira, uye inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwe ado, ngatitangei.
Yalitza Aparicio Nyaya dzeChidiki:
Kune vanotanga Biography, anonzi "Cleo“. Yalitza Aparicio Martínez akazvarwa pazuva regumi nemana raDecember 11 kuna amai vake, Margarita Aparicio (a nanny), uye baba, Raul Bautista Aparicio (mutengesi wemumugwagwa) muguta reTlaxiaco, Oaxaca.
Iye anomhanya-mhanya mutambi akaberekwa semwanasikana wechipiri wevana vashanu, kuvabereki vake vaanoda.
Waizviziva here?… Yalitza Aparicio semwana akatambura nekushomeka kwekutaura. Nomufaro, akatanga kutaura zvinyoro nyoro aine makore manomwe.
Little Yalitza inoratidzwa mune chena chena Mexico zvipfeko.
Tichitarisa kubva kumufananidzo wake wehudiki pamusoro, zvinoita sekunge vabereki vaYalitza Aparicio vakamusimudza vachitevedzera tsika dzekuMexico, tsika nemagariro.
Yalitza Aparicio Mhuri Kwayakabva uye Nechekumashure:
Nechitarisiko chake, unogona nyore kutaura kana kuratidza kwaakabva kana kwaakabva. Chokwadi ndechekuti, mhuri yaYalitza Aparicio ndeyemuno chizvarwa chekuMexico.
Zvinoenderana nekutsvaga, Yalitza Aparicio yemhuri mavambo musanganiswa wemadzinza maviri eMexico. Baba vake ndeverudzi rweMexico rweMixtec uye amai vake ndeveTrique dzinza.
Maonero evabereki vaYalitza Aparicio anokuudza kuti vangangove veMexico nekuzvarwa. Ivo vaviri (vanoratidzwa pazasi) vakura zvakanyanya kudzika muwanano yavo kusvika pakatarisana zvakafanana.
Yalitza Aparicio Vabereki Raul naMargarita.
Nguva refu asati ave nemukurumbira, vabereki vaYalitza Aparicio vaishandisa imba yepasi, zvinoreva kuti vanobva kumhuri yevarombo yemhuri.
Baba naamai vaYalitza Aparicio vaive vakaita sevapasi-paavhareji vagari vemuMexico vaishanda asi vasina dzidzo yepamusoro yezvemari uye kazhinji, vaitambura nemari kuti vachengete vese vari mumhuri yavo uye vaite zvakanaka.
Yalitza Aparicio Hupenyu hwepakutanga:
Tsvarakadenga mutambi akakurira muTlaxiaco, guta riri mumupata wakadzikama wakakomberedza nzvimbo ine makomo yeSierra Mixteca.
Pazasi mepu inoratidza nzvimbo yakagara mhuri yaYalitza Aparicio, inzvimbo iri 270 mamaira kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweMexico City.
Mepu inoratidza Tlaxiaco, uko Yalitza Aparicio Mhuri yaigara panguva yehudiki hwake.
Semwana mudiki, mhuri yaYalitza Aparicio vaigara mukamba kadiki kaivakwa vega kubva pamatanda, simbi, nevakarara njanji. Mufananidzo unoshungurudza wemhuri yake yemhuri unotaurira zvakawanda nezve kurera kwake kwakashata.
Yalitza akatsungirira kurerwa kwakaomarara sezvo baba vake nekuda kwekushungurudzika vakambobva pamba vachiri mwana.
Raul akasiya Yalitza pamwechete naamai vavo, mukoma mukuru (Edith), uye vanin'ina vadiki kuti vaende kunotora mikana yehupfumi kure.
Nekuda kweizvozvo, Varombo Yalitza akarererwa zvakanyanya naamai vake vasina murume, padivi pehanzvadzi yake hombe Edith, nevamwe vatatu vehama. Kare kumashure, amai vake vaishanda semusikana (mukomana uye muridzi wemba).
Kunyangwe nemarwadzo muhudiki hwake makore, Yalitza aigona neimwe nzira kuyera kuburikidza nedzidzo yake.
Paaive achiri kuyaruka, akatanga kuvaka kufarira kukuru mukutarisira kwevana. Yalitza akaenderera mberi achitsvaga degree mu pre-chikoro chemberi asati aenderera mberi kuve nedhigirii muhucheche hwekutanga dzidzo. Iye (akafananidzirwa pazasi) panguva yezvidzidzo zvake aipedza nguva yakawanda nevana.
Kushamwaridzana nevana panguva yake Degree Chirongwa.
Apedza degree rake rekudzidzisa, mutambi wetsiva mberi akaenderera mberi ndokutanga kushanda semudzidzisi wepachikoro apa Jardin de Nino Chikoro, Mexico. Yalitza haana kumbove nemari zhinji iye achishanda mushure mekudzidza kwake.
Aive murombo zvekuti aisakwanisa kutakura kazhinji kubva kumba kwemhuri kuenda kuchikoro.
Pane kudaro, Yalitza dzimwe nguva aifamba mamaira mashanu kuti asvike kubasa rake rinobhadhara. Kufanidzirwa pazasi ndicho chikoro (Chikoro chaJardin de Nino) uko Yalitza Aparicio yakashanda.
Jardin de Ninos Chikoro, uko Yalitza aiita iyo Kudzidzisa Jobho.
KuJardin de Ninos Chikoro (kubasa kwake), nguva yeKisimusi yaive yaifarirwa naYalitza. Kare kumashure, aipemberera zuva rakakosha nekupfeka mupfekero weSanta Claus.
Pazasi paYalitza akafananidzirwa muparati panguva yeimwe yemazuva eKisimusi kwaakamiririra nzvimbo yake yebasa (Jardin de Ninos Chikoro).
Kisimusi neYalitza uye waanoshanda naye akabata chikwangwani cheJardin de Ninos Chikoro.
Yalitza Aparicio Biography - Nzira yeku Fame Nhau:
Achienderera mberi nehupenyu mushure mekuita sarudzo yekusiya basa rake rekudzidzisa, Yalitza akashevedzwa kuti aite.
Akaenderera mberi nekunzvera kwekutungamira chinzvimbo cheiyo 2018 mutambo wefirimu "Roma", kwaaita seanoshandira imba nanny adaidzwa "Cleo". Iri raive basa raive rakanyatso kuongororwa nevamwe 110 vamwe vangangoita zvemitambi kutenderera pasirese.
Waizviziva here?… Yaive hanzvadzi yaYalitza Aparicio, Edith uyo pakutanga aive akagadzirira kuongororwa kweichi chikamu. Nekuti Edith Aparicio aive nepamuviri uye anga asiri mudunhu kuti adaro, akafunga kusundidzira Yalitza kutsiva iye.
Sezvineiwo Yalitza, akafadza mukuru wemuvhi Alfonso Cuarón uye akasarudzwa nekuda kwechinzvimbo chekutenda kwake kwakakwana mushandi wepamba basa raitaridzika kunge rechisikigo.
Yalitza akafananidzirwa paChiitiko mukugadzirwa kwemuvhi "Roma".
Kuti akwanise kuita zvimwe zviitiko zvechiitiko ichi, Yalitza Aparicio aifanira kudzidza mutauro weko (Mixtec) zvinoitika kuva mutauro wemadzitateguru ababa vake.
Waizviziva here? … Yalitza anga asiri mutambi wetsiva panguva yekuita muvhi. Muchokwadi, iye akange asina kudzidziswa kwepamutemo kuita pamberi pemuvhi.
Yalitza Aparicio Bio- Kumuka kune Mukurumbira Nhau:
Mukadzi wepamusoro akasimuka pakuve mukurumbira mushure mekugadzira nhoroondo semutambi wekutanga akasarudzika kusarudzika Oscar mumakore gumi nematatu.
Waizviziva here?… Basa rake muRoma rinodzokororwa raive naamai vake paakakurira muTlaxiaco. Yakanga iri mhando yekutsiva yenyaya yaYalitza Aparicio yehucheche uye akaita ruramisiro kune iro basa neruchiva.
Yalitza Aparicio's biography haigone kuve yakakwana pasina kutaura nezve rake basa muvhi (Roma) inoonekwa senge shanduko huru muhupenyu hwake.
Waizviziva here?… Roma yakaita inofungidzirwa madhora 2.8 miriyoni mushure mekuburitswa Netflix Zvakare, iyo bhaisikopo yakadarika yakapfuura $ 3 mamirioni mumaawa asingasviki makumi maviri nemana ekuburitswa kwayo.
Yalitza Aparicio akatyora ese marekodhi, kunyangwe izvo zvakamuona achionekwa pabutiro reVogue Mexico.
Akave mukadzi wekutanga wemuno kuratidza muVogue Mexico.
Nekukurumidza kumberi kunguva yekunyora Yalitza Aparicio's biography, iye zvechokwadi akatama kubva pakuve Mudzidzisi weChikoro kuenda kune mumwe weanokurumidza-kusimuka vatambi muHollywood. Akambotaura mumashoko ake;
"Semudzidzisi iwe unopa muenzaniso, unobva waita semuenzaniso, uye chiitiko ichi chekuve mufirimu chakaita kuti vanhu munharaunda yangu vanditarise senge mukana wekuti zviroto zvavo zvingaitike."
Iye anokurumidza-kusimuka mutambi Anoratidzwa pamwe naye Hollywood Firimu Mipiro.
Vamwe vese, sekutaura kwedu, ikozvino nhoroondo.
Nezve Yalitza Aparicio Murume:
Nekusimuka kwake mukurumbira, vateveri vazhinji vakaita kubvunza kuti Yalitza Aparicio ari muhukama here. Pane mukomana here, Murume OR kuti arikuroora here? Sepanguva yekunyora, zvinoita sekunge Yalitza asina kuratidza pachena zita remukomana wake.
Maererano nekutsvagiridza kwemagariro evanhu, zvinoratidzika Andre Montes mukomana waYalitza Aparicio uye murume anouya.
Andre Montesinoratidzwa pasi apa) ari Dental Surgeon kubva kuyunivhesiti yeMexico City ine mukurumbira, La Universidad Autónoma de Mexico (UNAM).
Pikicha collages aYalitza nemukomana wake, Andre anotaridzika vachifara pamwe chete.
Ipo Yalitza achichengeta yake yemagariro media feed padivi rehunyanzvi, mukomana wake akasununguka zvakanyanya kugovana mafoto akanaka avo.
Tichifunga nezve mafambiro ari kuita zvese zviri zviviri, zvingori chokwadi kuti roorano inogona kuve iri inotevera danho repamutemo.
Yalitza Aparicio Mhuri Nhau:
Kumutambi anokurumidza kukurumidza, iyo nzira yekuenda kune stardom ingadai isina kunakidza sezvazviri pasina rubatsiro rwemitezo yemhuri.
Muchikamu chino, tichakupa mamwe manzwiro enhengo dzemhuri yaYalitza Aparicio kutanga kubva kuvabereki vake.
Mufananidzo usingawanzoitika waYalitza neMhuri yake.
Nezve Baba vaYalitza Aparicio:
Raul Bautista Aparicio akazvarwa mukutanga 70s. Iye werudzi rweMixtec muMexico.
Kare kumashure, kuitira kuti arere mhuri yake, Raul akashanda semutengesi wemugwagwa muguta reTlaxiaco. Tichitarisa kubva pamufananidzo uri pazasi, zvinoita sekunge Yalitza akaita runyararo nababa vake avo vakambomusiya.
Yalitza nababa, Raul Bautista Aparicio.
Nezve amai vaYalitza Aparicio:
Margarita Aparicio ndiye amai vaYalitza. Iye akazvarwa ari pakati pe-70s uye ari werudzi rweTrique muMexico. Kare kumashure, aishanda semusikana (nanny uye muchengeti wemba) kuMexico.
Nekuda kwebasa rake raibhadhara, iye aive achiri kukwanisa kurera vana vake saamai vasina murume. Vese amai nemwanasikana vanotaridzika zvakafanana uye vanoita kunge vari padhuze nepadyo.
Yalitza akafananidzirwa naamai, Margarita Aparicio.
Nezve Yalitza Aparicio's Siblings:
Yalitza Aparicio ane vanin'ina vana, munin'ina mukuru (Edith), hanzvadzi mbiri diki uye munin'ina. Vamwe, kana vasiri vese vanin'ina vaYalitza Aparicio vanoonekwa mumufananidzo pazasi.
Yalitza akafananidzirwa naAmai, Hanzvadzi, uye Hama pamwe chete neshamwari dzemhuri pakudya.
About Yalitza Aparicio's Hama:
Kufambira mberi kubva pahupenyu hwemhuri hwaYalitza Aparicio, zvinoita kunge zvinyorwa zvidiki zviripo pamusoro pasekuru nasekuru vake.
Kunyanya zvakadaro, babamunini vaYalitza, vanatete, babamunini, babamunini, uye vazukuru (sep panguva yekunyora).
Kusvika pakuziva Yalitza Aparicio Hupenyu Hwega hwaizokubatsira iwe kuwana mufananidzo uri nani wehunhu hwake. Kutanga kuenda, iye ane runyararo, ane tariro, anoshinga uye futi, mumwe munhu ane pfungwa huru yekuseka.
Yalitza Aparicio anokwanisa kushandura mifungo yake kuita zviito zvekongiri uye uhwu hunhu hwaakaratidza mune rake basa mumuvhi "Roma“. Zvese izvi hunhu hwakasimba hweSagittarius Zodiac Sign yake.
Ari kure nekubata, Yalitza Aparicio akashandisa nemaune danho rake kutsigira kuringana kwevanhukadzi, kodzero dzemadzinza, uye kodzero dzevashandi vepamba.
Kubva pabasa rake muRomani, anozivikanwa weMexico mutambi aenda kumisangano yakawanda yekusimudzira kodzero dzevanhu uye yetsika yeMexico. Izvi zvave kuita kuti UNESCO irimutsigire kuve Mumiriri weGoodwill kuvanhu veko.
DG weUNESCO, Audrey Azoulay Achipa Yalitza semumiriri weGoodwill.
Yalitza Aparicio Lifestyle:
Panguva yekunyora, Yalitza Aparicio anofungidzirwa kuve ane Net Worth ye $1,000,000 US Madhora. Kwakatangira hupfumi hwaYalitza kunobva pamubhadharo wake se “Cleo”MuRoma.
Nekudaro uine mambure akakosha, Yalitza anorarama hupenyu hwakanyanya hunochengetedza. Haasi iye wevanhu vane mukurumbira vanoratidzira hupfumi hwake hukuru (dzimba, mota, nezvimwe) pasocial media.
Chokwadi ndechekuti, anorarama hupenyu husina mari yekushandisa zvisina hungwaru, kubatirira pane zvinodiwa zvinoda zvisingadhure mari.
Yalitza Aparicio Untold Chokwadi:
Tisati tazvidaidza kuti kuputira paYalitza Aparicio nyaya yehucheche uye biography, hezvino zvishoma-zvinozivikanwa kana zvisinga zivikanwe chokwadi nezvake.
Hapana chinyorwa cheRoma:
Yalitza haana kupihwa zvinyorwa kana kunyangwe nyaya yeiyo firimu. Pane kudaro, iye anoita kune zvinoitika sezvazvakaitika. Nzira iyo director wemuvhi kumisikidza iyo firimu yaive yakati siyanei, nzira yekuverenga nguva yakagamuchirwa mukugadzirwa kwefirimu.
Wechipiri wekuMexico mutambi weAcademy Best Actress:
Maererano ne LA Times inoisa, Yalitza ndiye mutambi wechipiri weMexico kusarudzwa semudzidzisi anotungamira mutambi. Wekutanga aive Salma Hayek webasa rake mu "Frida. ” Kunyanya zvakadaro, vamwe vatambi vatanhatu vemuMexico uye vatambi vakagamuchira masarudzo ekuita kubva kuChikemy.
Maitiro aakauraya humhandara hwake:
Pamberi pefirimu yemutambo wa2018 "Roma", Yaliza aive musikana aitya kwazvo. Nekutenda akakwanisa kukunda dambudziko iri mushure mekugamuchira kuraira kubva kuna sisi vake vakuru, Edith Aparicio. Sekureva kwaYaliza;
“Dzimwe nguva ndinodedera kana vanhu vakawanda vakandikomba. Ndiri kuvhunduka. Zvinhu zvakachinja mushure mekunge sisi vangu vandiudza — 'Usanyarara. Taura, taura zvinhu!. Paunenge uri pamberi pevateereri kana nevanhu vakawanda uye uchinzwa kutya, edza kusatarisa mumaziso avo. Edza kuona pamusoro pemisoro yavo, uye ipapo hauzonyanyi kunetseka”.
Chii chinonzi Chitendero chaYalitza Aparicio:
Nzvimbo yaakabva (Tlaxiaco) ine nhoroondo yechivanhu yakabatana neCatholic. Ichi ndicho chimiro chekutanga chechiKristu chitendero.
Tichifunga izvi, tinogona kutaura kuti pane mukana wekuti vabereki vaYalitza Aparicio vangangove vakamurera achitevedzera chitendero cheCatholic.
Muchikamu chino chekupedzisira cheYalitza Aparicio's Biography, iwe uchazomuona Wiki ruzivo rwekutanga. Izvi zvinokubatsira iwe kuwana akati wandei eYalitza Aparicio chokwadi mune yakapfupika uye yakapusa nzira.
Yalitza Aparicio Biography Chokwadi
Zita rizere: Yalitza Aparicio Martínez.
Zita rekudanwa: Cleo (zvichienderana nefirimu remutambo, ROMA).
Zuva rekuzvarwa nezera: 11 Kubvumbi 1993 (makore makumi maviri nemaviri panguva yaMbudzi 26).
Nzvimbo yekuzvarirwa: Tlaxiaco, Oaxaca, Mexico.
Vabereki: Raul Bautista Aparicio (Baba) naMargarita Aparicio (Amai).
Mukuru Sista: Edith Aparicio.
Vechidiki Vazukuru: 3 (Vanun'una vaviri uye munun'una).
Mukomana: Andre Montes (angangozova murume waanotevera).
kukwirira: 5 Tsoka 2 Inches.
Kurema Kwemuviri: Makirogiramu 57 (Makirogiramu 125)
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Yalitza Aparicio Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At ChildhoodBiography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!